गिरावट मा र सबै स्वाद को लागी 10 शीर्षकहरु वर्तमान साहित्य
यो गिरावट र सबै स्वादको लागि 10 शीर्षक प्राप्त गर्न
मारियोला डियाज-क्यानो अरेवलो | | परीक्षण, युवा साहित्य, नोभेला, रोमान्स उपन्यास, कविता
शरद .तु आउँदैछ। अन्तमा यस बर्षको मेरो मनपर्ने मौसम। परिदृश्य परिवर्तन हुन्छ, राम्रो छ, दिनहरू छोटो हुन्छन् ... संक्षेपमा, वातावरण पढ्नको लागि अपराजेय हुन्छ। शरद पनि हो समय र प्रेरणाको स्रोत, यी १० लेखकहरूलाई के भयो जब उनीहरू लेख्छन् 10 पुस्तकहरू। सबै स्वादका लागि, को लागी ठूलो र सानो, शैक्षिक, काव्य, निबन्ध, रोमान्टिक, यात्रीहरु। एक नजर लिनका लागि प्रस्तावहरू, पत्ता लगाउन वा पुन: पत्ता लगाउन।
1 लन्डनमा शरद Andतु - Andrea Izquierdo
2 शरद lastतुको अन्तिम कुनामा म तपाइँको लागि कुर्दै छु - क्यासिल्दा सान्चेज Varela
3 शरद Drतुका ड्रमहरू - डायना गैबाल्डन
4 स्वागत शरद! - एन्जिल्स नावारो
5 शरद पुस्तक - रोट्राउट सुसान बर्नर
6 शरद sunतु - रोजा गोमेज
7 एक रोमन शरद - जेभियर रिभर्टे
8 वसन्त Autतुको गीत - मार्सेलो ग्यालियानो
9 मध्य युगको शरद - जोहान हुइजिंगा
10 गाढा एन्जिल्सको शरद Kतु - क्रिस्टी स्पेन्सर र तबिता ली स्पेन्सर
लन्डनमा शरद .तु - Andrea Izquierdo
जारागोजाका यस युवा लेखकले कानून र व्यवसाय प्रशासनमा उनको अध्ययनलाई यस उपन्यासबाट सुरू हुने श्रृंखलाको लेखनको साथ मिलाउँछिन् २०१। मा प्रकाशित भयो.
लिली मा Ellesmere होटल मा आइपुग्छ हाइड पार्क। उहाँलाई धन्यवाद विश्वविद्यालयमा भर्ना गरिएको छ छात्रवृत्ति र आफ्नो विलासी निवासको लागि भय मा छ। त्यहाँ ऊ भेट्छ मेरिडिथ र अभा, जो त्यस वातावरणमा पानीमा माछा जस्तै हुन् र उनीहरूको रहस्यहरू प्रकाशमा नपरोस् भन्नेमा चासो छ। तिनीहरू पनि छन् कन्नर, रेक्स, मार्था, टम, फिन र ओलिभर, जसलाई लिली फेरि हेर्न चाहँदैनन्। र सबैलाई उनीहरूका कथाहरू एकअर्कासँग मिल्दछन्.
शरद को अन्तिम कुनामा म तपाइँको लागि कुर्दै छु - क्यासिल्दा सान्चेज Varela
रोमान्स उपन्यास जसको नायक कोरा मोरेट र चिनो मोन्टेनेग्रो, तिनीहरू C sixdiz को लागी एक्लो गाडीमा साठ ties० को दशकको मध्यमा भेटे। तिनीहरू सत्रह वर्षको छन्, तिनीहरू बुद्धिमान छन्, तिनीहरू शंकास्पद छन् र तिनीहरू कुनै पनि कुराका लागि सम्बन्धित छैनन्। ऊ लेखक बन्ने सपना देख्छ। र उनी सबै कुरा प्रश्न गर्दछिन। तर दुवैले एक अर्कालाई जुम्ल्याहा आत्मा र उनीहरूको रूपमा चिन्नेछन् प्रेम कथा यो अस्थायी रूपमा उसको दिनको अन्त्य सम्म जारी रहनेछ।
शरद Drतु को ड्रम - डायना गैबाल्डन
एउटासँग अधिक रोमान्स उपन्यास विधाको रानीहरू। यो छ चौथो किस्त श्रृंखला को बाहिरी, टाढा सेट अमेरिकी उपनिवेशहरू। त्यहाँ तिनीहरू १ 1766 मा आइपुगे क्लेयर र जेमी स्कटल्याण्ड भागेर पछि। तिनीहरू उत्तर क्यारोलिनाको आशामा पहाडहरूमा बसोबास गर्छन् खेत बनाउनुहोस् र टाढा बस्नुहोस् आसन्न अमेरिकी क्रान्ति को। र भविष्यमा ब्रायना रान्डल उसले आफ्नी आमा गुमाएको छ र आफ्नो बुबाको बारे जान्न चाहन्छ, जसलाई उसले चिनेन तर उनका बाबुआमाको बारेमा एउटा बौलाहा खोजीले उनलाई अगुवाई गर्छ विगतको यात्रा गर्न ईतिहास परिवर्तन गर्न।
स्वागत शरद! - एन्जिल्स नावारो
शीर्षक हराइरहेको हुन सकेन सानाको लागि र यहाँ पहिलो जान्छ। यस पुस्तकमा धेरै गतिविधिहरू गिरावट मा सेट, यात्राहरु को बीच मनोरन्जन को लागी आदर्श, छुट्टीहरु र वर्षा दिनहरु। त्यहाँ छन् पजलहरू, mazes, squiggles ... र सबै गणना गर्न सिक्न जारी राख्न, अवधारणाहरू पहिचान, सम्बन्धित र रंग।
शरद पुस्तक - रोट्राउट सुसान बर्नर
र यो दोस्रो हो, जुन सम्बन्धित छ र सीजनमा यस लेखकको श्रृंखला पूरा गर्नुहोस्। फेरि दृष्टान्तहरू, डबल पृष्ठ, शरद toतुसँग सम्बन्धित वर्णहरू, विवरणहरू, परिस्थितिहरू र परिदृश्यहरूबाट पूर्ण छन्। कुनै पाठ छैन, जसले दुबै पूर्व-पाठकहरू र पहिलो पाठकहरूको लागि रेखाचित्रहरू मार्फत भनिएका बहुविध कथाहरूको आनन्द लिन मद्दत गर्दछ।
शरद sunतु - रोजा गोमेज
असम्भव छ कि कविता यस समयको केहि पठनमा। यस लेखकले हामीलाई यो शीर्षकमा ल्याउँदछ। गुलाब, साहित्य, दिमागको शक्ति र भाषाको भव्यता आत्मा उत्थान गर्न र अधिक शक्ति महसुस गर्न।
एक रोमन शरद .तु - Javier Reverte
कसरी छैन यात्रा जब गर्मी अब शासन गर्दैन। र त्यहाँ भन्दा राम्रो ठाउँ छ अनन्त शहर शरद को एक टुक्रा खर्च गर्न? Javier Reverte हामीलाई बताउँछ डायरीमा उनको दर्शन cities शहरहरूको शहर vision। आफ्नो व्यक्तिगत शैलीको साथ, पूर्ण उत्कटता, संस्कृति, इतिहास, कविता, हास्य र कोमलता।
वसन्त Autतुमा शरद गीत - मार्सेलो ग्यालियानो
यो लेखक अर्जेन्टिन हामीलाई त्यो पुस्तक ल्याउँछ जुन तपाईंको कथा भन्छna बीस वर्षको युवक बस्तीबाट ब्यूनस आयर्स। आवासीय क्षेत्रमा काम गर्न सुरू गर्नुहोस् बिरामी मानिसको ख्याल गर्न, जसको जीवन केहि महिनामा बुझिन्छ। तर त्यहाँ सुन्दर, परिपक्व, करोडपति मानिस को उपस्थिति पछाडि धेरै छ कि त्यो आफ्नो जीवन पत्ता लगाउँदछ र परिवर्तन गर्दछ। कविता, विडंबना, उत्कटता, हास्य र कामुकता त्यो ठूलो सुनिन्छ।
मध्य युगको शरद .तु - जोहान Huizinga
जीवन, विचार र कलाको क्रममा यो पोर्ट्रेट चौधौं र पन्ध्रौं शताब्दी फ्रान्स र नेदरल्याण्डमा यो १ 1927 २। को क्लासिक हो। Huizinga हामीलाई देखाउँदछ ढिलो मध्ययुगीन युगबाट ठूलो फ्रेस्को त्यो समय को पुनर्निर्माण अनुमति दिन्छ।
अन्धकार एन्जिल्स को शरद .तु - Kristy स्पेन्सर र तबिता ली स्पेन्सर
१2014 XNUMX in मा प्रकाशित, यो छ गाथा को दोस्रो भाग अँध्यारो स्वर्गदूतहरू बहिनीहरू क्रिस्टी र तबिता ली स्पेन्सर द्वारा लिखित। यसले हामीलाई दुई अन्य बहिनीहरूको कथा बताउँछ, डावना र ईन्डी, एक उत्तम विगतको सम्झनाहरूले भरिएको लगभग परित्यक्त फार्ममा बस्दै। तिनीहरू धेरै फरक छन्, तर यस्तो लाग्छ कि ती दुबैको लागि प्रेम निषेध गरिएको छ। वा हुन सक्दैन। आफ्नो अस्तित्वको बिचमा तिनीहरू एक आपसमा मिल्दछन् भयानक रहस्य र एक प्रेम त्यो जीवनभर रहन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » नोभेला » यो गिरावट र सबै स्वादको लागि 10 शीर्षक प्राप्त गर्न
स्टीफन किंग को सबै भन्दा राम्रो काम
Emilia Pardo Bazán द्वारा "pazos de Ulloa"